Dowladda Somaaliya oo war kasoo saartay Shir ka dhacay Nairobi – Radio Daljir
Dowladda Somaaliya oo war kasoo saartay Shir ka dhacay Nairobi
Abriil 23, 2019 5:35 b 1
Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay Shir ay Magalada Nairobi ee dalka Kenya ku yeesheen, Siyaasiyiin, Xildhibaano iyo qaar ka mid ah Xisbiyada mucaaradka ee dalka, shirkaas oo ay kasoo sareen qodobo ay ku dhaliilayeen dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo shirkaasi ka hadlayey ayaa ugu baaqay Siyaasiyiinta ka qeyb gashay shirka Magaaladda Nairobi in aysan ku fogaan mucaarad nimadda .
Waxa uu sheegay Wasiirka in Dowladda Soomaaliya ay haatan wado isku raadin dadka Soomaaliyeed laakiin mucaaradka ku shiraya dalka dibadiisa looga baahan yahay in aysan orodka ka badin hadii aysan ka tanaasuleyn mucaaradnimada.
Ugu dambeyn Wasiirka Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in siyaasiyiinta hanka hoggaamineed leh in ay dowladda soo hor fariistaan,isla markana ay ka wada hadlaan Soomaali ahaan masaalixda Ummadda Soomaaliyeed wax walbana dhameeyaan.
Siyaasiyiinta, Xildhibaannada iyo qaar ka mid ah Xisbiyada mucaaradka ee ku shiray Nairobi ayaa qodobadii ay oo saareen waxaa ka mid ahaa inay qabsan doonaan shirweyne ay ku doonayaan inay kusoo dhisaan xukuumad Cusub ,iyaga oo ku eedeeyey Xukuumadda Soomaaliya inay fashilantay,waxaana badi ay ahaayeen kuwo xilal kasoo qabtay dowladihii hore ee dalka soo maray.
Abdirizak 1 year ago
Daljir radio ma wuxuu noqday idaacad afka dawlada farmaajo ku hadasha maxaa ka qaldamay radio daljir.